MB 2015 Febroary - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2015 Febroary
Faly aho rehefa manazava ny olona hoe: "Raha tsy mahita aho dia tsy hino izany." Matetika aho no re hoy izany rehefa misalasala ny olona fa misy Andriamanitra na mampiditra ny olona rehetra amin'ny fahasoavany sy ny famindram-pony izy. Mba tsy hampahatezitra, dia manondro aho fa tsy mahita magnetika na herinaratra isika, fa fantatsika avy amin'ny vokatr'izy ireo fa misy izy ireo. Toy izany koa amin'ny rivotra, ny herim-po, ny feo ary ny eritreritra mihitsy aza. Amin'izany fomba izany no ahatsapantsika ilay antsoina hoe "fahalalana tsy misy ohatra". Tiako ny manondro fahalalana toy ny "visibility tsy hita maso."
Niantehitra fotsiny tamin’ny masonay izahay, nandritra ny taona maro, dia tsy afaka naminavina afa-tsy izay any an-danitra. Noho ny fanampian'ny teleskaopy (toy ny Teleskaopy Hubble) dia mahafantatra zavatra betsaka kokoa isika ankehitriny. Izay “tsy hita” teo aloha dia hita ankehitriny. Saingy tsy izay rehetra misy dia hita. Zavatra maizina z. B. tsy mamoaka hazavana na hafanana. Tsy hita maso amin'ny teleskaopyntsika izy io. Fantatry ny mpahay siansa anefa fa misy ny matin'ny maizina satria fantatr'izy ireo ny fiantraikan'ny sinton'ny tany. Ny quark dia singa madinidinika vitsivitsy izay iforonan'ny proton sy ny neutron ao amin'ny fototry ny atôma. Miaraka amin'ny gluon, ny quark dia mamorona hadrons hafahafa kokoa, toy ny mesons. Na dia tsy nisy iray tamin'ireo singa ao amin'ny atôma ireo aza no voamarika, dia nasehon'ny mpahay siansa ny vokany.
Tsy misy mikraoskaopy na teleskaopy izay ahitana an’Andriamanitra, toy ny ao amin’ny Soratra Masina ao amin’ny Jaona 1,18 Hoy izy: Andriamanitra tsy hita: «Tsy mbola nisy nahita an’Andriamanitra. Fa ny Zanany lahitokana, izay mahalala tsara ny Ray, no naneho tamintsika ny maha Andriamanitra azy." Tsy misy fomba “manaporofoana” ny fisian’Andriamanitra amin’ny fomba ara-batana. Mino anefa isika fa misy Andriamanitra satria efa niaina ny vokatry ny fitiavany tsy misy fepetra sy ambony indrindra. Izany fitiavana izany dia mazava ho azy fa tena manokana, miharihary amin’ny fomba miharihary ao amin’i Jesosy Kristy. Hitantsika ao amin’i Jesosy izay notsoahin’ny apostoliny hoe: Andriamanitra dia fitiavana. Ny fitiavana, izay tsy hita mihitsy, dia toetran’Andriamanitra sy antony manosika ary fikasany. Araka ny nambaran'ny TF Torrance:
“Ny fivoahan’ny fitiavan’Andriamanitra tsy mitsaha-mitombo sy tsy mitsahatra, izay tsy misy antony hafa amin’ny asany afa-tsy ny fitiavana izay an’Andriamanitra, dia arotsaka tsy misy fetra, na inona na inona olona ary na inona na inona fihetsiny” (Christian Theology and Scientific Culture, p. 84).
Tian'Andriamanitra noho ny maha-izy antsika, tsy noho ny maha-izy antsika sy ny ataontsika. Ary izany fitiavana izany dia aseho antsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra.
Na dia tsy afaka manazava tanteraka ny tsy hita maso aza isika, toy ny fitiavana na ny fahasoavana, dia fantatsika fa misy izy io satria ny zavatra hitantsika dia misy ampahany. Marihina fa mampiasa ny teny hoe "ampahany" aho. Tsy te ho latsaka ao anatin’ny fandriky ny fieboeboana isika izay manazava ny tsy hita maso. Nambaran’i TF Torrance, izay nianatra teolojia sy siansa, fa ny mifanohitra amin’izany no marina; ny tsy hita dia manazava ny hita. Mba hanazavana izany, dia nampiasa ny fanoharana momba ny mpiasa tao amin’ny tanimboaloboka izy ( Matio 20,1:16 ), izay nanakaraman’ilay tompon’ny tanimboaloboka mpiasa tany an-tsaha mandritra ny andro. Amin'ny fiafaran'ny andro dia mitovy ny karama azon'ny mpiasa tsirairay, na dia miasa mafy mandritra ny tontolo andro aza ny sasany ary ora vitsivitsy monja no miasa. Ho an'ny ankamaroan'ny mpiasa dia toa tsy rariny izany. Ahoana no ahafahan'ny olona miasa adiny iray ihany no mahazo karama mitovy amin'ny olona miasa tontolo andro?
Navoitran'i Torrance fa diso ny hevi-dehibe ao amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy, izay tsy momba ny karama sy ny rariny, fa momba ny fahasoavana tsy misy fepetra, malala-tanana ary mahery. Io fahasoavana io dia tsy mifototra amin'ny faharetantsika niasa, ny halavantsika nino, ny halalinantsika ary ny fankatoavantsika. Miankina tanteraka amin'ny hoe iza Andriamanitra. Miaraka amin'io fanoharana io, Jesosy dia manao ny "tsy hita" ny fahasoavan'Andriamanitra "hita maso", izay tsy mitovy amintsika, mahita sy manao zavatra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mikasika ny vola azontsika, fa momba ny fahalalahan-tanana avy amin'Andriamanitra.
Ny fanoharan'i Jesoa dia milaza amintsika fa Andriamanitra dia manolotra ny fahasoavany mahafinaritra amin'ny olona rehetra. Ary na dia atolotra mitovy habe amin'ny fanomezana aza ny rehetra dia misafidy ny hiaina ao anatin'ny vanim-pahasoavan'ny fahasoavana, ka manome azy ireo fahafahana hahafinaritra azy ireo kokoa noho ireo izay mbola tsy nanao ny safidy. Ny fanomezana fahasoavana dia natao ho an'ny rehetra. Tsy mitovy ny ataon'ireo isam-batan'olona. Rehefa miaina ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika dia lasa hita maso izay tsy hita maso.
Ny tsy fahitana ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy mahatonga azy ireo ho tena misy. Nanolotra ny tenany ho antsika Andriamanitra mba hahalalantsika sy ho tia Azy ary hahazoantsika famelan-keloka ary hifandraisantsika Aminy amin’ny maha Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina Azy. Isika dia miaina amin’ny finoana fa tsy amin’ny fahitana. Efa niaina ny sitrapony isika teo amin’ny fiainantsika, teo amin’ny eritreritsika sy ny ataontsika. Fantatsika fa Andriamanitra dia fitiavana, satria fantatsika hoe iza Izy ao amin’i Jesosy Kristy, izay “naneho” azy tamintsika. Tahaka ny ao amin'i Jaona 1,18 (Fandikana New Geneva) dia voasoratra:
«Tsy mbola nisy nahita an’Andriamanitra. Ny Zanakalahy Tokana no nanambara Azy tamintsika, dia Izy Andriamanitra sady mipetraka eo anilan’ny Ray”. Mahatsapa ny herin’ny fahasoavan’Andriamanitra isika rehefa miaina ny fikasany hamela heloka sy hitia antsika – ny hanome antsika ny fanomezam-pahasoavan’ny fahasoavany. Toy ny nataon’i Paoly ao amin’ny Filipiana 2,13 (Fandikana New Geneva) dia naneho toy izao: "Andriamanitra mihitsy no miasa ao aminao ary tsy hanomana anao fotsiny, fa mamela anao hanao izay tiany."
Miaina ao amin'ny fahasoavany